गलकोटमा धमाधम पक्की पुल बन्दै::Nepali News Portal from Nepal
गलकोटमा धमाधम पक्की पुल बन्दै
बागलुङ, १६ मंसिर – पुरानो सदरमुकाम रहेको हरिचौर जानकालागि दुइवटा पक्की पुल बन्न लागेका छन् । हटिया देखि हरिचौर तर्फको गौदी खोला र दरमखोलामा पक्की पुल बन्न लागेका हुन् । लामो समय देखि अलपत्र दुइ पुल बनेपछि हरिचौर तर्फ जाने र हरिचौर हुँदै ताराखोला जान पनि सहज हुने स्थानीयले बताए । गलकोट नगरपालिका ६ को चरौदी र वडा नं. ५ हरिचौर बजारका लागि ती पुलले जोड्ने छन् । अझै हरिचौर बजार नजिकैको खहरे खोला पुल भने बन्न बाँकी छ । दैनिक पर्यटकहरु र ताराखोला सम्म पुग्ने यात्री नियमित यात्रा गर्ने भएकोले ती खोलामा पक्की पुलको आवस्यकता थियो । हरिचौर पुग्न दरमखोला, गौदी खोला र खहरे खोला तर्नुपर्छ । तीनवटै स्थानमा पुल नभएपछि गत बर्षातमा स्थानीयले सास्ती खेपेका थिए । गलकोटे राजाको दरबार पुग्नका लागि धेरै पहिला बनाइएका झोलुंगे पुलहरु जीर्ण भएपछि पैदल यात्रीले पनि सास्ती खेपेका थिए । मोटरबाटो बनिसकेकोले पुल नहुँदा बर्षातमा समसय थियो । सडक मार्ग खुलेपनि पुल नभएर बर्षातमा घुमाउरो बाटो हिड्नुपर्ने बाध्यता ती पुलले सहज बनाउने वडा नं. ५ का अध्यक्ष नारायणध्वज मल्लले बताए । दैनिक आउजाउको समस्या समाधानका लागि गलकोट नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पक्की पुलहरु निर्माणको काम थालिएको हो ।
गलकोटको नगरपालिका कार्यालय रहेकै स्थानमा जानपनि यसअघि पुल नभएर समस्या थियो । हाल गौंदीखोला र दरमखोलामा पुल निर्माणको काम थालिएकोले ताराखोलादेखि हटिया झर्नेलाई पनि सहज हुने बताइएको छ । ताराखोलादेखि हरिचौर आउने सडकमा पक्की पुल तयार भैसकेको छ । अन्य दुइवटा निर्माणाधिन भएकोले खहरेखोलामा पुल बनेमा यात्रा सहज हुने स्थानीयको भनाई छ । गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेका अनुसार चालु बर्षभित्रै खहरेको पुल पनि बनिसक्नेछ । थोरै बजेट भएपनि साझेदार संस्था खोजेर निर्माण गर्न लागिएकोले चालु बर्ष भित्रै सकिने विश्वास उनले गरे । महत्वपूर्ण पुल निर्माणमा संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । ६ बर्ष अघि तत्कालिन जिविसको लगानीमा दरमखोलामै हरिचौर बजारनजिकै अर्को पक्की पुल बनिसकेको छ । पुरानो सदरमुकाम र गलकोट दरबार हेर्न दैनिक १ सय जना पुग्छन् । यही बाटो भएर ताराखोलाको गाईघाट झरना हेर्न पनि दैनिक २ सय जना जाने गरेका छन् ।
ताराखोला गाउँपालिकाबाट गलकोटहुँदै सदरमुकाम जाने मुख्य सडक पनि यही हो । त्यसैले खहरेमा पनि तत्काल पुलको आवस्यकता परेको वडा अध्यक्ष नारायणध्वज मल्लले बताए । ‘सानो लगानीले नहुने भएपछि केन्द्रीय तहमा माग भैरहेको छ’ उनले भने, ‘सडकको स्तरउन्नती र पुलका लागि प्रदेश सरकारको पनि सहयोगको आश्वासन मिलेको छ ।’ चालु बर्षदेखिनै काम थाल्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले गलकोट र ताराखोला समेट्ने चक्रपथका लागि हटिया, हरिचौर हुँदै ताराखोला जाने सडकमा ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिसकेको छ । बहुबर्षे योजना अन्र्तगत ११ करोडमा यो सडक स्तरउन्तीको काम हुने ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । गौंदी खोला पुल भने ‘नयाँबाटो जुम्ली आचार्य’ संयुक्त निर्माण कंपनीले ढलान गर्ने तयारी गरेको छ । साँढे ३ करोडको लागतमा यो पुलको चारबर्ष अघि ठेक्का भएको थियो । समय सकिएर ताकेता गरेपछि कंपनीले हिउँदमै हस्तान्तरण गर्ने गरी काम सक्ने तयारी गरेको हो । राजाको पुल चुँडिएपछि जंघारै तरेर जान बाध्य भएको दरमखोला पुल पनि निर्माणाधिन छ । गलकोटमा आयोजित घुम्टे महोत्सवको अवसर पारेर अस्थायी कल्भर्ट बनाएर तर्न लागिएको यो खण्डमा जयबाबा गोरखा÷ओखलढुंगा संयुक्त निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।
५९ करोड ७२ लाखमा बन्ने यो पुल चालु बर्षको असारसम्म सक्ने तयारी भैरहेको हो । यी पुलहरु बनेपछि हटिया, हरिचौर, चरौंदी, बसाहा फाँट सबैतिर सहजै यात्रा गर्न सकिन्छ ।
बर्षातमा गलकोट नगरपालिकामा समेत सवारी साधन पुग्न नसक्दा पैदल यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । यी पुलले सिंगो उपत्यकालाई जोड्नेछ । नगरपालिका कार्यालय बसेपछि चरौंदीको फाँटमा अहिले सयौं घर बनेका छन् । हटिया बजारमा जग्गा अभावले जिप पार्क समेत बन्न सकेको छैन । पुलहरु बनेपछि जिपपार्क, बसपार्क र अन्य पार्किक क्षेत्र चरौदी, बसाहा र हरिचौरमा बनाउन सकिने मल्लले बताए ।